လာမယ့်ရက်သတ္တပတ်တွင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး မိုးများမည်၊ စပါးရိတ်သိမ်းမည့် တောင်သူများ အထူးသတိထားရန်လိုအပ်ဟု မိုးလေဝသ ပညာရှင်ဦးချစ်ကျော် သတိပေး – CharTake
chartake | October 19, 2020 | Weather | No Comments
အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်မှ ၂၆ ရက် တပတ်အတွင်းမိုးလေဝသအခြေအနေ (19/10/2020 11:45am mst)
ဒီတပါတ်လည်း လေဖိအားနည်း သိုမဟုတ် လေပွေလှိုင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သေးတဲ့ ရက်သတ္တပါတ် ဖြစ်နေဆဲပါ။ အလယ်ပိုင်းဒေသ တချို့ ( စစ်ကိုင်းအောက်၊ မန္တလေးတိုင်း၊ မကွေးတိုင်း) မိုးရခဲ့လို့ စိတ်သက်သာပါတယ်။
ဒေသတချို့ (ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်း) မိုးများခဲ့လို့ တချိုဆည်/ ရေကန်ကြီးများ ရေပြည့်မှတ်ရောက် နေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။သတိပြုလိုတာက ဒီတပါတ်အတွင်းလည်း ရန်ကုန်တိုင်း ပဲခူးတိုင်းအပြင် မွန်ပြည်နယ် ဧရာဝတီတိုင်း ရခိုင်ပြည်တွေ ၂၀ ရက်မှ ၂၄ ရက် အတွင်း လေပွေလှိုင်းကြောင့် မိုးထပ်ရနိုင်လို့ ဆည်/ကန်များ ရေလွတ်ရေထိမ်း သတိပြုစေ လိုပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်မှ ၂၆ ရက်အတွင်းမှတော့ အလယ်ပိုင်းက စစ်ကိုင်းအောက်ပိုင်း ချင်းပြည်နယ် ကချင်ပြည်နယ်တွေ မိုးအသင့်အတင် ထပ်မံရွာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီရက်များမှာ မန္တလေးတိုင်းနဲ့ မကွေးတိုင်းက နေရာကျဲကျဲ မှ နေရာကွက်ကျား မိုးအနည်းငယ်မှ အသင်အတင့် ရွာနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးလိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အောက်ပိုင်းမှ လယ်သမားများ လယ်ကွင်းအတွင်း ရေသွင်းရေထုတ် ဂရုစိုက်သင့်သလို လာမဲ့ စပါးရိတ်သိမ်းချိန်တွင် လည်း ချိန်ခါမဟုတ် မိုးများကို အထူးသတိပြုရန် ရှိနေပါကြောင်း ကြိုတင် အသိပေး လိုပါတယ်။
မုတ္တမကွေ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ရေလုပ်သားများ နေ့စဉ် မိုးလေဝသသတင်း နားထောင်၍ မိုးလေလှိုင်း ပြင်းထန်ချိန် ဘေးကင်းရာ ခိုလှုံနိုင်ရေး အလေးထား စေလိုပါတယ်။ နောက်တပတ်မှာ ထပ်မံတင်ပြပါမယ်။ ခရက်ဒစ်
Unicode … လာမယျ့ရကျသတ်တပတျ မွနျမာတနိုငျငံလုံး မိုးမြားမညျ၊ စပါးရိတျသိမျးမညျ့ တောငျသူမြား အထူးသတိထားရနျလိုအပျဟု မိုးလဝေသ ပညာရငျဦးခဈြကြျော သတိပေး
အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျမ ၂၆ ရကျ တပတျအတှငျးမိုးလဝေသအခွအေနေ (19/10/2020 11:45am mst)
ဒီတပါတျလညျး လဖေိအားနညျး သိုမဟုတျ လပှေလေငျးဖွဈပျေါနိုငျသေးတဲ့ ရကျသတ်တပါတျ ဖွဈနဆေဲပါ။ အလယျပိုငျးဒသေ တခြို့ ( စဈကိုငျးအောကျ၊ မန်တလေးတိုငျး၊ မကှေးတိုငျး) မိုးရခဲ့လို့ စိတျသကျသာပါတယျ။
ဒသေတခြို့ (ရနျကုနျတိုငျး ပဲခူးတိုငျး) မိုးမြားခဲ့လို့ တခြိုဆညျ/ ရကေနျကွီးမြား ရပွေညျ့မတျရောကျ နတောလညျး တှရေ့ပါတယျ။သတိပွုလိုတာက ဒီတပါတျအတှငျးလညျး ရနျကုနျတိုငျး ပဲခူးတိုငျးအပွငျ မှနျပွညျနယျ ဧရာဝတီတိုငျး ရခိုငျပွညျတှေ ၂၀ ရကျမ ၂၄ ရကျ အတှငျး လပှေလေငျးကွောငျ့ မိုးထပျရနိုငျလို့ ဆညျ/ကနျမြား ရလှေတျရထေိမျး သတိပွုစေ လိုပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၂၄ ရကျမ ၂၆ ရကျအတှငျးမတော့ အလယျပိုငျးက စဈကိုငျးအောကျပိုငျး ခငျြးပွညျနယျ ကခငျြပွညျနယျတှေ မိုးအသငျ့အတငျ ထပျမံရှာနိုငျပါတယျ။ အဲဒီရကျမြားမာ မန်တလေးတိုငျးနဲ့ မကှေးတိုငျးက နရောကြဲကြဲ မ နရောကှကျကြား မိုးအနညျးငယျမ အသငျအတငျ့ ရှာနိုငျပါကွောငျး အသိပေးလိုပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံ အောကျပိုငျးမ လယျသမားမြား လယျကှငျးအတှငျး ရသှေငျးရထေုတျ ဂရုစိုကျသငျ့သလို လာမဲ့ စပါးရိတျသိမျးခြိနျတှငျ လညျး ခြိနျခါမဟုတျ မိုးမြားကို အထူးသတိပွုရနျ ရနပေါကွောငျး ကွိုတငျ အသိပေး လိုပါတယျ။
မုတ်တမကှေ့ မွဈဝကြှနျးပျေါ ရလေုပျသားမြား နစေ့ဉျ မိုးလဝေသသတငျး နားထောငျ၍ မိုးလလေငျး ပွငျးထနျခြိနျ ဘေးကငျးရာ ခိုလနိုငျရေး အလေးထား စလေိုပါတယျ။ နောကျတပတျမ ထပျမံတငျပွပါမယျ။ ခရကျဒဈ
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသမှ တောင်သူဦးကြီးများအတွက် ( ၂၁ . ၁၁ . ၂၀၂၀ မှ ၃၀ . ၁၁ . ၂၀၂၀ ) ရက်နေ့အထိ ခန့်မှန်းချက်
ယနေ့ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ အတွက် မိုးလေဝသ သတင်းများ